Filtrer les éléments par date : jeudi, 07 mars 2019
jeudi, 07 mars 2019 22:51
Vondrombahoakam-paritra: Voatendry ireo mpisolotoerana ireo lehiben'ny Faritra nesorina tamin'ny toerana
Naoty navoakan'ny ministeran'ny Ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny fiandohan'ity volana martsa ity no manendry ireo mpisolotoerana ireo lehiben'ny Faritra nesorina tamin'ny 16 febroary 2019, mandra-panendry ireo Governoran'ny Faritra.
jeudi, 07 mars 2019 22:45
Ambasady Malagasy ao Paris: Tsy misy fiara nanjavona izany
Nitondra fanazavana androany ny ministeran'ny raharaham-bahiny Malagasy mandiso ny vaovao nivoaka an-gazety teto Magasikara, ka manamafy fa anaty garazy ao amin'ny toeram-ponenan'ny ambasadaoro ao 1 boulevard Suchet, 75016, Paris ilay fiara marika Mercedes modely 350d mitondra ny laharana EV-903-FF izay fananan'ny ambasadin'i Madagasikara rahateo.
jeudi, 07 mars 2019 21:28
Morondava: Mamy Merison Claver no kandida voalohany nanatitra ny dosieny tao amin'ny OVEC
Kandida tsy miankina izy ary ny Talata teo no tafapetraka teo anivon'ny OVEC Morondava ny dosieny.
jeudi, 07 mars 2019 20:42
Toamasina: Nametraka ny taratasy firotsahan-kofidiany i Riri Be
Androany alakamisy 7 martsa atoandro no nanatitra ny antontan-taratasy firotsahan-kofidiany ho solombavambahoaka teo anivon'ny OVEC Toamasina I i Rakotomalala Henri na Riri-Be sy ny ekipany.
Ny antoko AKFM-Fanavaozana no nanolotra azy ho kandida.
jeudi, 07 mars 2019 20:01
Oniversiten'i Toamasina: Voafidy ho filoha i Dr Zafitody Conscient
Izy no handimby toerana ny Pr Dr Velo Jérôme, ity farany izay nahavita taom-piasana roa.
Notanterahina tao Barikadimy ny alarobia 6 martsa ny fifidianana.
Talen'ny sampam-pianaran'ny oniversite any Fenoarivo Atsinanana i Dr Zafitody talohan'izao nahavoafidy azy ho filohan'ny Oniversiten'i Toamasina izao.
jeudi, 07 mars 2019 13:32
Maminirina Jean Eddy: Mangataka fahafahana vonjimaika sy hafindra fonja
Nakarina tetsy Anosy nohenoina teo anivon’ny Fitsarana manokana miady amin’ny trafika ny hazo sarobidy i Maminirina Jean Eddy omaly. Nandritra izany no nangatahany fahafahana vonjimaika sy mba hafindra fonja. Naverina any amin’ny fonjaben’i Tsiafahy izy taorian’izay.
Teo amin’ny toeram-piantsonan’ny fiara eo amin’ilay toeram-pivarotana lehibe La City Ivandry-Antananarivo no nisamboran’ny Polisy an’i Maminirina Jean Eddy ny tolakandron’ny 12 febroary 2019 rehefa namoahan’ny Fitsarana manokana miady amin’ny trafika ny hazo sarobidy didy fampisamborana.
jeudi, 07 mars 2019 12:35
Antsiranana: Miantso vonjy ny mpianatry ny IST-D
Voaloa efa amam-bolana ny saram-pisoratanana anarana nefa ny fianarana tsy misy. Mitaraina ny mpianatry ny Institut Supérieur de Technologie (IST) Antsiranana satria nigrevy nanomboka tamin'ny volana desambra 2018 ny mpampianatra ary mihantona nanaraka an’izay koa ny fianarana.
Eo amin’ny mpitantana ny oniversite sy ny mpampianatra no mipetraka ny fifanolanana, ka ny mpianatra no very fanahy ary manontany tena rahoviana ihany no hisy fianarana.
Miantso ny ministera mpiahy ny mpianatry ny IST-D hamaha ny olana mampikatso ny asa pedagôjika ato amin’ity sekolim-panjakana ity.
Anio i Madagasikara no mankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny fahenoana.
Ankalazaina manerantany isaky ny 8 martsa ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny fahenoana.